Ngabe udinga ummeli womndeni ozokusiza mathupha?
Kwesinye isikhathi kungadingeka ubhekane nodaba olusemthethweni emkhakheni wezomthetho womndeni. Udaba oluvame kakhulu kwezomthetho emndenini ukwahlukanisa. Imininingwane engaphezulu mayelana nezinqubo zesehlukaniso nabameli bethu besahlukaniso zingatholakala ekhasini lethu lesehlukaniso. Ngokungezelela kwesehlukaniso, ungacabanga futhi, ngokwesibonelo, ukuqashelwa kwengane yakho, ukwenqaba ukuba ngumzali, ukuthola ilungelo lokugcina izingane noma inqubo yokutholwa…
IMITHETHO YOMKHAYA E-AT LAW & MORE
UNGATHANDA UKUTHATSHELWA? LONTO LOKUXHUMANA NATHI
Kwesinye isikhathi kungadingeka ubhekane nodaba olusemthethweni emkhakheni wezomthetho womndeni. Udaba oluvame kakhulu kwezomthetho emndenini ukwahlukanisa.
> Ukuphikwa kokuba ngumzali
Imininingwane engaphezulu mayelana nezinqubo zesehlukaniso nabameli bethu besahlukaniso zingatholakala ekhasini lethu lesehlukaniso. Ngaphezu kwesehlukaniso, ungacabanga futhi, ngokwesibonelo, ukuqashelwa kwengane yakho, ukwenqaba ukuba ngumzali, ukuthola ilungelo lokugcina izingane noma inqubo yokutholwa. Lezi yizinkinga ezidinga ukulawulwa kahle ukuze zikuvikele ekubhekaneni nezinkinga kamuva. Ngabe ufuna inkampani yezomthetho ekhethekile emthethweni womndeni? Lapho-ke usuthole indawo efanele. Law & More ikunikeza usizo olungokomthetho emkhakheni wezomthetho womndeni. Abameli bomthetho womndeni wethu basebenza kuwe ngezeluleko zomuntu.
Ngaphezu kwezingqinamba eziphathelene nokwamukelwa, ukugcinwa, ukwenqatshwa ukuba ngumzali kanye nokutholwa, abameli bomthetho womndeni wethu futhi bangakusiza ngezinqubo eziphathelene nokuphuma kanye nokugadwa kwezingane zakho. Uma ubhekene nalenkinga eyodwa noma ngaphezulu zalezi zinkinga, kuwukuhlakanipha ukuthola usizo lommeli womthetho womndeni ozokusiza ekuxazululeni okusemthethweni.
Ukwamukela kwakha ubudlelwano bomthetho womndeni phakathi komuntu owemukela ingane nengane. Indoda-ke ingabizwa ngokuthi ngubaba, inkosikazi ibe ngumama. Umuntu owemukela ingane akufanele abe nguyise noma umama wengane. Ungayivuma ingane yakho ngaphambi kokuzalwa, ngesikhathi sokumenyezelwa kokuzalwa noma nangemva kwesikhathi esizayo.
Udinga ummeli womndeni?
Isehlukaniso sinomthelela omkhulu ezinganeni. Ngakho-ke, sinamathisela inani elikhulu kwizintshisekelo zezingane zakho
Sinendlela yomuntu siqu futhi sisebenza ngokubambisana nawe ukuthola isisombululo esifanele
Ngabe uzokhokha noma wamukele i-alimony? Futhi malini? Siyakuqondisa futhi sikusize ngalokhu
Ngabe ufuna ukuhlala ngokwehlukana? Siyakusiza
Izimo zokuvuma ingane
Uma ufuna ukwamukela ingane, kufanele ufeze imibandela embalwa. Isibonelo, kumele ube neminyaka eyi-16 noma ngaphezulu ukwamukela ingane. Kepha kunezimo eziningi. Udinga imvume kumama. Ngaphandle kokuthi ingane indala kuneminyaka eyi-16. Lapho ingane ineminyaka eyi-12 noma ngaphezulu, udinga futhi imvume ebhaliwe evela enganeni. Ngaphezu kwalokho, ngeke uyamukele ingane uma ungavunyelwe ukushada nonina. Isibonelo, ngoba uyisihlobo sikamama segazi. Ngaphezu kwalokho, ingane ofisa ukuyivuma kungenzeka ukuthi ayinabo vele abazali ababili abasemthethweni. Ngabe ubekwa ngaphansi kokugada? Uma kunjalo, uzodinga imvume kuqala enkantolo yenkantolo yesifunda.
Ukwamukela ingane ngesikhathi sokukhulelwa
Lokhu kusho ukwamukelwa kwengane engakazalwa. Ungayemukela ingane kunoma yimuphi umasipala waseNetherlands. Uma umama (olindele) engafiki nawe, kufanele anikeze imvume ebhaliwe yokwamukelwa. Ngabe umlingani wakho ukhulelwe amawele? Ngemuva kwalokho ukwamukelwa kusebenza kuzo zombili izingane umlingani wakho akhulelwe ngazo ngaleso sikhathi.
Ukwamukela ingane ngesikhathi sokumenyezelwa kokuzalwa kwayo
Ungayivuma nengane yakho uma ubika ukuzalwa. Kufanele ubike ukuzalwa kumasipala lapho ingane yazalelwa khona. Uma umama engahambi nawe, kufanele anikeze imvume ebhaliwe yokwamukelwa.
Yokwemukela ingane ngosuku olulandelayo
Kwenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi izingane azamukelwa zize zikhule kakhulu noma zibe nobudala obukhulu. Ukuvuma-ke kungenzeka kuwo wonke umasipala waseNetherlands. Kusukela eminyakeni eyi-12 uzodinga imvume ebhaliwe evela enganeni nakunina. Uma ingane isivele ineminyaka eyi-16 udinga kuphela imvume yengane.
Ukukhetha igama uma uvuma ingane
Isici esibalulekile ekwamukeleni ingane yakho, ukukhethwa kwegama. Uma ufuna ukukhetha izibongo zengane yakho ngesikhathi sokuvuma, wena nomlingani wakho kufanele niye kumasipala ngokubambisana. Uma ingane ineminyaka engaphezu kwengu-16 ubudala ngesikhathi sokuvuma, ingane iyokhetha ukuthi yisiphi isibongo esifuna ukuba nayo.
Uma uvuma ingane, uba ngumzali osemthethweni wengane. Ngemuva kwalokho uyoba namalungelo nezibopho ezimbalwa. Ukuze ube ngummeli wengane osemthethweni, kufanele futhi ufake isicelo segunya labazali. Ukwamkelwa kwengane kusho okulandelayo:
• Isibopho esingokomthetho sakhiwa phakathi komuntu owemukela ingane nengane.
• Unesibopho sokuyondla enganeni ize ifinyelele eminyakeni engama-21.
• Wena nengane niyizindlalifa zomthetho zomunye nomunye.
• Ukhetha isibongo sengane kanye nomama ngesikhathi sokuvuma.
• Ingane ingathola ubuzwe bakho. Lokhu kuya ngomthetho wezwe onobuzwe kulo.
Ungathanda ukuvuma ingane yakho futhi usenemibuzo ngenqubo yokuvuma? Zizwe ukhululekile ukuxhumana nabameli bethu bomthetho bomndeni abanolwazi.
Ukuphikwa kokuba ngumzali
Lapho umama wengane eshadile, umyeni wakhe uba nguyise wengane. Lokhu kuyasebenza nakubambiswano olubhalisiwe. Kungenzeka ukwenqaba ukuba ngumzali. Isibonelo, ngoba oshade naye akayena ubaba wengane yemvelo. Ukuphika kokuba ngumzali kungacelwa kubaba, umama noma ingane uqobo. Ukuphika kuba nemiphumela yokuthi umthetho awubheki ubaba osemthethweni njengobaba. Lokhu kusebenza kabusha. Umthetho wenza sengathi ubuyise bukababa osemthethweni abuzange bube khona. Lokhu kunemiphumela yokuthi ngubani oyindlalifa yabo.
Kodwa-ke, kukhona amacala amathathu lapho ukwenqaba kokuba ngumzali kungenzeki (noma kusaba khona):
• Uma ubaba osemthethweni futhi engubaba wengane yemvelo;
• Uma ubaba osemthethweni evume isenzo umkakhe akhulelwe ngaso;
• Uma ubaba osemthethweni wayesazi ngaphambi komshado ukuthi unkosikazi wakhe wesikhathi esizayo ukhulelwe.
• Kwenziwa umehluko kumacala amabili okugcina lapho umama ebengathembekile ngobaba wengane yakhe.
Ukuphikwa kobuzali kuhlala kuyisinqumo esibalulekile. Abameli bomndeni we Law & More bakulungele ukululeka ngendlela engcono kakhulu ngaphambi kokwenza lesi sinqumo esibalulekile.
Umntwana osemncane akavumelekile ukuthi enze izinqumo ezithile ngokwakhe. Kungakho ingane ingaphansi kwegunya lomzali oyedwa noma bobabili. Imvamisa, abazali bazithola izingane zabo ngokuzenzakalela, kepha kwesinye isikhathi kufanele ufake isicelo sokugcinwa ngenqubo yenkantolo noma ngefomu lesicelo.
Uma unelungelo lokugcina ingane:
• Unesibopho sokunakekela nokukhulisa ingane.
• Cishe ngaso sonke isikhathi unesibopho sesondlo, okusho ukuthi kufanele ukhokhe izindleko zokunakekelwa nezemfundo (kuze kufike eminyakeni engu-18) nezindleko zokuphila nokufunda (kusukela eminyakeni yobudala eyi-18 kuye kwengama-21).
• Uphatha imali yengane nezinto;
• Ungummeli wakhe osemthethweni.
Ukunakekelwa kwengane kungahleleka ngezindlela ezimbili. Lapho umuntu oyedwa enelungelo lokugcina, sikhuluma ngokugcinwa kwenhloko eyodwa, kuthi uma abantu ababili begcinwe, kuphathelene nokugcinwa ngokubambisana. Inani eliphakeme labantu ababili lingagcinwa. Ngakho-ke, awukwazi ukufaka isicelo seziphathimandla zabazali uma abantu ababili sebevele benelungelo lokugcina ingane.
Uthola nini ukugcinwa kwengane?
Ngabe ushadile noma unobambiswano olubhalisiwe? Lapho-ke bobabili abazali bazoba nengane ehlanganyelwe yengane. Uma lokhu kungenjalo, ngumama kuphela ozogcinwa esitokisini. Ngabe ushada njengabazali ngemuva kokuzalwa kwengane yakho? Noma ungena ebambiswaneni elibhalisiwe? Uma kunjalo, uzothola negunya labazali abazenzakalelayo. Isimo ukuthi uvume ingane njengobaba. Ukuze uthole igunya lobuzali, kungenzeka ungabi ngaphansi kweminyaka eyi-18, ube ngaphansi kokugada noma ube nokukhubazeka kwengqondo. Umama ongaphansi kweminyaka engu-16 noma engu-17 ubudala angafaka isicelo enkantolo sokumenyezelwa kweminyaka yokuthola ingane. Uma kungekho omunye wabazali onogadi, ijaji liqoka umnakekeli.
Joyina ukugcinwa uma kwenzeka isehlukaniso
Isisekelo sedivosi ukuthi bobabili abazali bagcina ilungelo lokugcina. Kwezinye izimo, inkantolo ingahle iphambuke kulo mthetho uma izisiza kakhulu izingane.
Ngabe ufisa ukuthola ilungelo lokugada ingane yakho noma uneminye imibuzo maqondana negunya labazali? Ngemuva kwalokho sicela uthinte omunye wabameli bethu bomndeni abanolwazi. Siyajabula ukucabanga kanye nawe futhi sikusize ngesicelo segunya labazali!
Noma ngubani ofuna ukwamukela ingane evela eNetherlands noma evela phesheya kumele ahlangabezane nemibandela ethile. Isibonelo, kumele okungenani ube neminyaka eyi-18 ngaphezulu kwengane ofisa ukuyikhulisa. Izimo zokwamukela ingane evela eNetherlands ziyahluka ngokuya ngemibandela yokwamukela ingane iphesheya. Isibonelo, ukutholwa yiNetherlands kudinga ukuthi ukutholwa kungumzuzwana omuhle kakhulu wengane. Ngaphezu kwalokho, ingane kufanele ibe yincane. Uma ingane ofisa ukuyikhulisa ineminyaka eyi-12 noma ngaphezulu, imvume yayo iyadingeka ukuze kutholwe ingane. Ngaphezu kwalokho, isimo esibalulekile sokutholwa kwengane evela eNetherlands ukuthi unakekele futhi wakhulisa ingane okungenani unyaka owodwa. Isibonelo njengomzali ongamzali, umnakekeli noma umzali wokutholwa.
Ukwamukelwa kwengane ngokusemthethweni evela kwamanye amazwe, kubalulekile ukuthi ungakafiki iminyaka engama-42. Uma kunezimo ezikhethekile, kungenziwa into eyehlukile. Ngaphezu kwalokho, le mibandela elandelayo iyasebenza ekwamukelweni kwengane evela kwamanye amazwe:
• Wena nomlingani wakho kufanele ninikeze imvume yokuhlola i-Judicial Amadokhumenti System (JDS).
• Umehluko weminyaka phakathi komzali wokutholwa owemdala kakhulu nengane ungeqi eminyakeni engama-40. Uma kwenzeka kunezimo ezikhethekile, okungajwayelekile kungenziwa.
• Impilo yakho kungenzeka ingabi isithiyo sokutholwa. Kufanele uhlolwe udokotela.
• Kufanele uhlale eNetherlands.
Ukusukela ngesikhathi ingane yakwelinye izwe isiya eNetherlands, ubophekile ukuthi uhlinzeke ngezindleko zokunakekelwa nokukhulisa ingane.
Izwe lapho ingane evela khona ingeyakho ingabeka nezimo zokwamukelwa. Isibonelo, ngempilo yakho, ubudala noma imali oyitholayo. Ngokuyinhloko, owesilisa nowesifazane bangathola ingane kuphela ukusuka phesheya ndawonye uma beshadile.
Ngabe ufisa ukwamukela ingane evela eNetherlands noma emazweni aphesheya? Uma kunjalo, ukwaziswa kahle ngenqubo nangezimiso ezithile ezisebenza esimweni sakho. Abameli bomthetho womndeni we Law & More bakulungele ukululeka futhi bakusize kule nqubo.
Ukufakwa esikhundleni kuyisilinganiso esinamandla kakhulu. Ingasetshenziswa uma kungcono ukuvikela kwengane yakho ukuthi ihlale kwenye indawo isikhashana. Ukufakwa kwesinye isikhathi kuhambisana njalo nokugadwa. Inhloso yokufakelwa kwelinye izwe ukuqinisekisa ukuthi ingane yakho ingaphinde ihlale ekhaya ngemuva kwesikhathi esithile.
Isicelo sokufaka ingane yakho ngaphandle kwamakhaya singafakwa kwiJaji Lezingane nguNgqongqoshe Wezokunakekelwa Kwentsha noma yiBhodi Yokunakekela Nokuvikela Izingane. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuphuma. Isibonelo, ingane yakho ingabekwa emkhayeni okhulisa izingane noma ekhaya elinakekela izingane. Kungenzeka futhi ukuthi ingane yakho ibekwe nomndeni.
Esimweni esinjalo, kubalulekile ukuthi ukwazi ukuqasha ummeli omethembayo. At Law & More, izintshisekelo zakho nezakho zengane kubaluleke kakhulu. Uma udinga usizo kule nqubo, ngokwesibonelo ukuvimbela ingane yakho ukuba ibekwe kude nekhaya, ufike endaweni efanele. Abameli bethu bangakusiza wena nengane yakho uma isicelo sokufakwa ngaphandle sithunyelwe, noma singahanjiswa, kwiJaji Lezingane.
Abameli bomthetho womndeni we Law & More ingakuhola futhi ikusize ekuhleleni zonke izici zomthetho womndeni ngendlela engcono kakhulu. Abameli bethu banolwazi olukhethekile emkhakheni wezomthetho womndeni. Ngabe unelukuluku lokuthi yini esingakwenzela yona? Ngemuva kwalokho ngicela uthinte Law & More.